/Blog/Dianabol , Gallery/Konke Okudingeka Ukwazi Nge-Dianabol Powder Ukudayiswa
Posted on 12 / 27 / 2018 by UDkt Patrick Young wabhala ku Dianabol, Gallery.
Ufuna ukuthuthukisa ubuhlungu bemisipha yakho, ukuqala ukuqala noma ukugcina inzuzo enkulu? I-Dianabol (methandrostenolone) i powder kufanele ibe yinto yakho elandelayo enkulu. Thola ukuthi yini okudingeka ukwazi ngalezi i-anabolic steroids, ukusetshenziswa, ukusebenza, nendlela yokudlulela imiphumela emibi.
Uma ungumzimba womzimba, uzokuqonda kangcono umzabalazo wokuthola ubunzima bomzimba. Ukubhaliselwa ekuzivocavoca kanye nokwenza lokho okusebenzayo okunamandla okufana nemigqa ye-barbell noma amaphaphu kungenzeka ukuthi akwanele ukukhipha imisipha yakho.
Ukusebenza ngaphandle kunezinzuzo zezempilo, kodwa kudinga ukubekezela okukhulu, ukuvumelana kanye nesikhathi. Ngisho, awukwazi nje ukuzivocavoca ngesonto, zihlolisise ngesibuko, futhi ulindele ukubona imisipha emilingo ewumlingo. Kodwa-ke, ungenza ngokuhlakanipha ngokufaka isicelo sokusebenza nge-anabolic steroids evunyelwe, okungenakuzaza ukuthi ukwandisa imisipha yakho ezinsukwini eziyisikhombisa.
Kuyini i-Dianabol (Methandrostenolone) Powder?
Incazelo ye-Dianabol Powder
I-Raw Dianabol iyinhlanganisela yamakhemikhali ne-CAS no. (72-63-9), abavela ekilasini le-C17 anabolic steroids. I-steroid enamandla yokwenza izinto ethandwa kakhulu kusukela ku-1950's. Isidakamizwa sihlomula ikakhulukazi abagijimi namalungu omzimba abafuna ukugcina imisipha yabo futhi baqinise amandla abo ngesikhathi esifushane.
I-steroid ye-anabolic iyaziwa ngokuthi i-hepatoxic. Ukuze unciphise lesi sici, abathuthukisi be-Dianabol bafaka iqembu le-methyl ku-17th isikhundla sekhabhoni. I-bond-bond ibuye yengezwe ezikhundleni zokuqala nezesibili zama-athomu e-carbon ukuze kuncishiswe imiphumela emibi ye-androgenic efana ne-acne noma i-pattern baldness.
Isingeniso esiphezulu kunayo yonke ye-Megestrol acetate powder
Ngokungafani nezinye i-steroids, i-Dianabol amaprotheni powder ivunyelwe emazweni amaningi. Kodwa-ke, lesi sidakamizwa yisimo se-schedule III esilawulwayo futhi sizotholakala kuphela emtholampilo, ikakhulukazi e-US
Ngisho nangemva kweMpi Yezwe II, abaseMelika kanye neSoviet Union bebelokhu bencintisana futhi befuna ukuphuma phakathi kwezimfundiso. Nakuba bobabili behileleke empini yangempela, babecabanga ngokushaya phakathi kwezemidlalo nokuhlola inyanga.
Phakathi kwe-1940 ne-50, amaRussia alawula ama-Olimpiki, ngenxa yemikhiqizo ye-testosterone abadlali ababeyisebenzisa. Noma kunjalo, le mfihlo yayiphila isikhathi esifushane lapho i-US ngaleso sikhathi. Udokotela olimpiki, uJohn Ziegler, wathola leli qhinga. Ngenhloso yokungena eSoviet Union, wahlangana neCiba Pharmaceuticals ukuze afike nomkhiqizo ofanayo.
I-Dianabol (methandrostenolone) powder yaba khona ngasekupheleni kwe-1950s. Kwakuvelele kakhulu phakathi kwama-1960 no-'70s 'njengokhetho olukhethile ku-bodyteroilding steroids.
Ngokungafani nabandulele, lesi sidakamizwa kwakuyi-steroid yokuqala ye-anabolic emakethe. Umgomo walesi sidakamizwa kwakuwukuthi uhambisane nomgudu wokungena emthethweni we-steroids ngabadlali. Unemiphumela engaphansi kwe-androgenic futhi iyatholakala nge-odokotela emazweni amaningi. I-D-bol inamandla kabili kune-testosterone.
Ukulinganiswa kokulinganisa 210 100 320
Isilinganiso se-Androgenic 60 100 45
Amakhemikhali kanye Nezimo Zomzimba Ze-Dianabol Powder
Igama Product I-Methandrostenolone
Igama lamakhemikhali 17a-methyl, i-17b-hydroxy, i-1,1-androstadienone, i-3-eyodwa
I-CAS cha. 72-63-9
Iphuzu lokuxuba (° C) 163 - 167
isisindo Yamamolekhula I-300.442 g / mol
ifomula Yamamolekhula C20H28O2
solubility · Amanzi (9.7 mg / L ku-25 ° C)
Ukusetshenziswa Kwenza ukwanda komzimba we-muscle
Amagama weBrans and Trade · Dianabol
Indlela Yokuthenga Dianabol (methandrostenolone) Powder Online
Ukuthenga i-anabolic steroids kuncike ezintweni ezimbalwa. Indawo yakho inendima ebalulekile kusukela ezinye izifunda zibeke imingcele ekuthengeni, ekuphatheni, nasekusebenziseni i-Dianabol powder. Isibonelo, ukusetshenziswa kwe-methandrostenolone kanye neziqephu zayo akuvumelekile e-US, e-Australia nase-Canada, ngaphandle uma kungaphansi komthetho ovumelekile. Nokho, kwamanye amazwe afana neMexico, I-Dianabol powder uthenge kulula njengokuthenga ama-sneakers.
Ukuthenga ngokomthetho u-Dianabol
I-D-bol ingaba yisidakamizwa esivinjelwe esifundazweni sakho, kodwa usengenza ukuthenga ngokomthetho kusuka kulayisensi Umkhiqizi we-powder Dianabol. Ake ngichaze. Uma ungenalo isigwebo somthetho esivela kudokotela, ingqondo yakho cishe izochofoza ezimakethe ezimnyama. Isivumelwano singase sibe sihle kakhulu ngokusebenzisa umnyango wangemuva, kodwa kungenzeka ukuthi uhlale emithini yemithi engamanga, engajwayelekile futhi ebulalayo.
Yize kungenangqondo ukuthuthela esimweni esisemthethweni sokusebenzisa i-steroids, usengabhange ebhodini le-Dianabol powder elisemthethweni. Okungenani, umkhiqizo ophezulu oqinisekisiwe oye wakhiqizwa ngaphansi kwezimo ezingenamthetho nezilawulwayo.
I-Dianabol Powder Edayiswayo
Abathengisi abahlukahlukene be-intanethi banikeza ama-anabolic steroids ukudayiswa. Njengoba izitolo zaseShayina zilokhu zikhukhula, ungathumela uzungeze u-Dianabol powder waseChina, ikakhulukazi ngokuthengwa okuningi. Ukuze uthole umdayisi onokwethenjelwa, cabangela umthombo ophezulu, ukuhambisa ukuguquguquka, nokutholakala kolwazi olufanele kusayithi elithile.
Izinyathelo zika-Dianabol powder ukuthengwa kwe-intanethi:
Yiya ku-https: //www.proanabolics.com/ noma nanoma iyiphi enye into ethembekile yase-Dianabol powder njengale Isitolo seShayina.
Chofoza kubha yosesho, thayipha "i-Dianabol," bese usesha into
Uzothunyelwa ukubhalisa i-akhawunti ngokulandelela okulula komkhiqizo ngesikhathi sokuthumela. Noma kunjalo, ungakhetha ukuhlola njengesimenywa.
Nikeza imininingwane ye-akhawunti yakho
Qinisekisa i-oda bese ulinda ukulethwa ngqo emnyango wakho.
Qaphela ukuthi intengo ye-Dianabol ye-powder ihlukahluka kusuka kumthengisi oyedwa kuya komunye nomthamo osithengayo.
Indlela yokwenza i-Dianabol ekhaya
Kungakhathaliseki ukuthi ungathenga yini i-steroid eyenziwe ngomumo, ungathenga izinto ezihlukile zokwakheka bese uthola iresiphi yakho ye-Dianabol powder eyenziwe ngokwakho. Le nqubo inenzuzo ngoba iyona yokonga futhi ukuguqulwa kukuvumela ukuba wenze ngokwezifiso umthamo wokuxhumana nomzimba wakho.
Kukhona ama-zokupheka okuguquka oku-Dianabol powder okufika ku-5, ahluka ngokuvumelana nezithako ezisetshenziswayo kanye nesilinganiso.
I-Benzyl Benzoate (BB)
I-Alcohol Alcohol (BA)
I-Ethyl Oleate (EO)
I-vial glass vial
I-sringe kanye nesihlungi sesirinji sinyumba
Ake sifinyelele emininingwaneni yokwenza i-Dianabol ekhaya;
20ml @50 mg / ml I-250ml / @80 mg / ml 250ml @80 mg / ml 100ml @50 mg / ml 50ml @50 mg / ml
D-bol powder 1g I-20g noma i-17.86ml I-20g noma i-17.86ml I-5g noma i-5.6ml I-2.5g noma i-2.23ml
Amafutha aqoshiwe 5.0ml 182.14ml 157.14ml 29.4ml Sebenzisa amafutha abomvu kunalokho (31.77ml)
I-Guaiacol - - - 15% 15% (7.5ml)
Ngokuvamile, i-Dbol powder iyakuthanda okubabayo, kepha izithako ezingenhla zizokwenza ukuthi i-flavour ingasebenzi.
Indlela Dianabol (D-bol) esebenza ngayo
Dianabol powder ivimbela imisipha ukuba iphule ngenkathi ivuselela amaprotheni nokwandiswa kwe-nitrogen. Lesi sidakamizwa sizokwenza umzimba wakho ugxile kuzo zonke amaprotheni adliwe zibe yimisipha. Ngenxa yesikhathi esincane sokuphila, uzoqala ukuqaphela ezinye izinguquko ezihle ezinsukwini ezingu-7 - 10.
I-steroid ivuselela isifiso somsebenzisi, amandla, nomzwelo.
I-Dianabol (D-bol) Isikhathi sokuphila
I-Dbol ine-half-life average yamahora we-4. Uma ucabanga ukuthi isikhathi sincane kakhulu, uzodinga ngokulinganayo uhlukanise umthamo kulo lonke usuku ukuze ugcine izinga lokuhlushwa kwegazi.
Isikhathi sokuthola i-Dianabol
I-steroid izotholakala kuze kube amasonto ayisithupha kusukela ngesikhathi ogcina ukuyithatha. Uma ungumdlali osebenzayo, kufanele uyeke ukuthatha u-Dianabol izinyanga ezimbili ngaphambi kokuhlolwa.
Imiphumela ye-Dianabol: Ngizothola ini?
I-steroid yama-anabolic isebenza ngokuguqula izinqubo zokudla kanye nokwandisa amaprotheni anabolism. Kubanikazi bomzimba, kungenzeka ukuthi uhlangabezana namandla amakhulu lapho usebenza. Yize i-Dianabol ingase ingakunikezi ukubonakala kwe-vascular, kuyokwenza okungenani yandise imisipha yakho futhi ikubukeke ibhelele kunanini ngaphambili.
Kuzozivocavoca, i-Dianabol steroid yiyona eyengeziwe engcono yokukhulisa amandla akho futhi ikunike amandla okukhuthazelela ukusebenza okujulile. Isidakamizwa siphuthumisa isikhathi sokutakula futhi ngesikhathi esifanayo sinciphisa ukukhathala.
I-Methandrostenolone iyinqolobane engcono kakhulu yeziguli ezinenkinga ekutholeni noma ekugcineni isisindo esinempilo. Umkhiqizo ungakwenza ungene kuma-20 amakhilogremu amasonto ambalwa.
Thuthukisa amazinga e-Testosterone
Uma unesifo esiphansi se-testosterone, udokotela wakho kungenzeka abeke i-steroids esemthethweni njenge-Dbol.
Ukwandisa ukugcinwa kwe-nitrogen kanye nokulungisa izicubu, ikakhulukazi ngemva kokuhlanganiswa kwesikhumba, ukuhlinzwa, noma ukushisa. Ukwengeza, i-Dianabol isetshenziselwa ukwelapha izinhlobo ezithile ze-anemia.
I-Dianabol (D-bol) Isilinganiso Nokusetshenziswa (Ingabe Kuphephile ukuthatha i-Dianabol?)
Izinga le-Dbol elilinganiselwe phakathi kwe-15 no-50mg / ngosuku. Kodwa-ke, abanye abasebenzisi abanolwazi bangasebenzisa okuningi njengo-100mg ngosuku. Into ebaluleke kunazo zonke okumele uyiqaphele ukuthi ukuphakama okuphezulu kwe-steroids kuzosithinta kakhulu ukucindezeleka kwegazi.
Abesifazane kanye nezintombi akufanele bathathe okungaphezu kuka-15mg. Kwabadlali besifazane, isilinganiso esiphezulu sezinsuku zonke ngu-30mg. Noma yiliphi inani eliphakeme kunalokhu kungaholela ekukhuleni kwezici zesilisa zobulili kanye neminye imiphumela emibi ye-dbol engavumeleki.
I-Dbol ine-half-life short, ngakho-ke, isidingo sokuhlukanisa umthamo 2 - izikhathi ezingu-3 ngosuku. Kunconywa ukuthatha lesi sidakamizwa ngezikhathi zokudla ukuze unciphise imiphumela emibi efana ne-nausea. Enye indlela eqinisekisayo yokwandisa ukutholakala kwe-Dianabol ngokufaka ama-grapefruit ekudleni kwakho.
I-Dbol yayiyi-steroid yokuqala ye-anabolic engathathwa ngomlomo. Nakuba lesi sidakamizwa sitholakala kakhulu futhi sithathwa njengethebhulethi, ungayilungisa nge-injection ye-intramuscular. Ukuze uthole imiphumela emihle kakhulu, kufanele uvume isitaki se-Dianabol ngokusebenzisa amanye ama-steroids afana ne-Durabolin, i-testosterone, i-Primobolan, noma i-trenbolone.
Umjikelezo ovamile we-Dianabol uhlala phakathi kwamasonto amane nesithupha ngomthamo olingana no-30 - 50mg. Phakathi nesikhathi, qiniseka ukufaka i-steroid nge-dose yansuku zonke yekhadiarine ne-N2guard yokuvimbela ukulimala kwesibindi. I-Aromasin kufanele iphinde ihlangane ukuze ivimbele ukunciphisa, okubangela ukubunjwa kwe-estrogen nokugcinwa kwamanzi.
Imiphumela ye-Dianabol ivame ukubonakala ngaphakathi kwesonto lokuqala lokuyithatha. Nasi ukulinganisela ukuthi kungakanani ubunzima obungayithola emjikelezweni ogcwele;
I-Period (amasonto) Imisa (amakhilogremu)
I-Post Cycle Therapy
Ekupheleni kwamasonto ayisithupha, kubalulekile ukucubungula ukwelashwa kwe-post-cycle ukuze ugweme ukucindezelwa kwe-hormone emahlathini e-pituitary. Ezimweni eziningi, umjikelezo uzokwehlisa amazinga e-testosterone. Ngakho-ke, unomsebenzi wokuqinisekisa ukuthi izinga libuyela emuva evamile ukuze ungalahlekelwa isisindo semisipha oqobile. Ukwelashwa kuqhubeka kuze kube amasonto amane.
I-Dianabol (D-bol) Imiphumela emibi: Indlela Yokugwema Imiphumela Yecala
I-Dianabol steroid inenzuzo kuphela uma uyisebenzisa ngokuhlakanipha ngenkathi ucabangela izinyathelo zokuphepha kanye nezingozi ezihilelekile. Uma ukwandisa umthamo, ukwandisa amathuba okuba nemiphumela emibi kakhulu.
Ukugcinwa kwamanzi noma ukuvinjelwa
Ukuxoshwa kwe-pituitary gland
Ukukhula kwezinwele okungavamile
Ukuvezwa kwezilwane noma izici zesilisa zobulili kwabesifazane njengezinsimbi ezijulile zomculo, ukukhula okungavamile kwezinwele, noma ukwandiswa kwe-clitoris.
Ukwanda kwe-cholesterol engalungile ye-LDL nokuncipha kwe-cholesterol enhle ye-HDL
Indlela Yokugwema Nokuphatha I-Dianabol Side Effects
Sebenzisa i-inhibitor ye-aromatase noma i-anti-estrogen
I-Dbol inesifiso sokunambitheka ku-estrogen. Uma kune-hormone eningi kakhulu emzimbeni, imiphumela yokugcinwa kwamanzi, ukubhuka, ukungasebenzi, i-gynecomastia, noma ukucindezeleka.
Izindaba ezinhle ukuthi ungasebenzisa i-inhibitor ye-aromatase ukuvimba ukuguqulwa kwe-dbol ku-estrogen. Ezinye izibonelo zihlanganisa i-letrozole, i-Aromasin, ne-Arimidex. Qinisekisa ukuthi uthatha lezi zithako ngesikhathi somjikelezo we-Dianabol kanye nokwelashwa kokujikeleza kokuthutha.
Izithako zesibindi sezempilo
Ukwengeza okuhle kufanele kunciphise ubuthi obushukela ngesibindi ngokunciphisa umonakalo we-oxidative. Uma iqukethe ubisi thistle, i-NAC, i-TUDCA, phakathi kwezinye izithako ezicebile, lokho kusho ukuthi kufanelana nalo mthethosivivinywa.
Kudingeka uthathe i-Dianabol ngokubambisana namaminerali okuthuthukisa amazinga e-cholesterol. Ezinye zalezi zengezo zifaka imvubelo yemvu irayisi, amafutha wezinhlanzi, i-niacin, noma i-cox enzyme i-Q10.
Ngokuvamile, inani le-testosterone elikhiqizwa umzimba ngeke lanele ngesikhathi sokujikeleza kweDbol. Uma izinga lihamba phansi, inqubo yokwakha imisipha izophinde igwebe. Ngakho-ke, ukufaka ezinye izithako ze-testosterone ne-Dianabol kuzokusiza ukuba ufinyelele umgomo wakho.
Hlola ekudleni kwakho
Thatha ukudla okune-omega fatty acids kanye namaprotheni anempilo. Ukudla okunamafutha aphezulu kuyimbangela enkulu yokugcinwa kwamanzi, ngakho-ke, ukwanda kwamazinga egazi.
Thatha amanani amancane alawulwayo
Abaqalayo akufanele kudlule umthamo we-20mg / ngosuku. Nakuba ezinye izici zomzimba ezitholakalayo zingasengozini yokuthatha i-100mg ye-steroid, umkhuba awuphephile. Uma kufanele ukwandise inani, i-50mg ilungile. Isilinganiso esiphakeme sifana nemiphumela emibi efana nokuphakama kwengcindezi yegazi.
Qaphela ukuthi umjikelezo we-Dianabol kufanele uhlale phakathi kwamasonto ayisithupha nesishiyagalombili.
Izingane, intsha, noma ubani osemncane kuneminyaka eyi-30
Ezinganeni, ukuthatha u-Dianabol kuzophazamisa ukuvuthwa kwamathambo nokuthuthukiswa kocansi.
I-steroid ingase iholele ekungalweni okungabhethri
Iziguli zomdlavuza webele nesisu
Ukuzuza kweMisa enkulu
Uzoqala ukuqaphela imiphumela ngokushesha uqale umthamo. Awudingi ngisho nokuqhathanisa i-Dianabol ngaphambi nangemva kwezithombe ukuphawula umehluko. Ngemuva kwesonto lokuqala, umzimba wakho uzovela ogcwele, futhi uzothola inzuzo enkulu.
Ngesikhathi usebenzisa umzimba wokuzivocavoca, uzothola amandla okwanele ukwenza umsebenzi omkhulu noma uphakamise izinsimbi ezinzima. Ekupheleni komjikelezo, uzothola okuthile eduze kwe-20lbs.
Kukhulisa ukukhishwa kwamahomoni okukhula kwabantu
Lesi sidakamizwa siphakathi kwezimbalwa steroid zomthetho okugqugquzela i-hormone yokukhula. Uma uhlanganisa isitaki se-Dianabol ngokudla okunempilo nokusebenza okuvamile, i-steroid isebenza ngomlingo. Nakuba uthola ubukhulu obuningi, amafutha omzimba wakho anciphisa kakhulu.
Iningi le-steroids ukudayiswa lingenakulungiswa. Kodwa-ke, i-Dianabol isetshenziswa ngomlomo ngamaphilisi, amaphilisi, ama-capsules, noma ifomu elimanzi. Ungenza futhi iresiphi yakho ye-Dianabol powder futhi wenze ngokwezifiso umthamo.
Imiphumela emibi kakhulu ye-dbol side effects are high blood pressure, ukulimala kwesibindi, kanye ne-gynecomastia. Iqiniso lokuthi isifuba sakho ligcwele ngokungaqondakali esikhathini esingaphansi kweviki kungabangela ukuvimbela. Ungakwazi ukulawula yonke imiphumela emibi ngokugcina isiyalo somuntu siqu nokulandela izinkombandlela, kodwa i-gynecomastia ayinakuqondiswa.
Eminye imiphumela emibi eyenza izici zomzimba ukuba zigcine lesi sidakamizwa zingamathuba okungazalwa, izinkinga zenhliziyo, nokulimala kwesibindi.
Uma uzwa nge-anabolic steroids, imibuzo eminingana ngokuqinisekile iyobaleka ngomqondo wakho. "Ingabe i-Dianabol yomthetho?","Ngingayithola yini umthamo ngaphandle kwemithi evumelekile?","Ngabe ama-steroid athola nini?"Nemibuzo efanayo. Isihloko esilandelayo siphendule zonke izimpendulo ozamile ukuzithola.
Dbol ukudayiswa yayisakazeke phakathi kwe-1960 ne-1970 steroid bodybuilding era. Noma kunjalo, imiphumela yaso emibi yenza i-FDA ihlukanise njengento yeklasi ye-III futhi inciphise ukusetshenziswa kwayo. E-United States, i-Dianabol iyatholakala kuphela nge-odokotela.
Ama-Nootropics ama-7 amahle (ama-Smart Drugs) emakethe ye-Armodafinil
I-Top 10 testosterone ester: okulungile kuwe? Izibuyekezo ze-Oxymetholone: ​​I-Ultimate Guide ye-Oxymetholone (i-Anadrol)